Hevitra mahafinaritra hanamboarana collage volo antonony | Famoronana an-tserasera
Raha ny famolavolana na famoronana misy sary samihafa dia manome safidy maro ho antsika ny collage. Saingy, ao anatin'izy ireo, ny collage vintage dia fomba iray hanovozana zavatra maoderina ary hahatonga azy io halaza sy kanto kokoa. Fa hainao ve ny manao collage vintajina?
avy eo hiresaka aminao momba ny collage izahay, manasongadina ny collage vintage. Hanome anao hevitra maro izahay hananganana iray ary koa programa sy fampiharana izay azonao anaovana azy ireo, na manana traikefa amin'ny famolavolana sary sy sary ianao, na ny zavatra ampiasain'ny mpampiasa sy ny tena manokana no tadiavinao azy.
1.1 Ary collage volom-boaloboka?
2 Hevitra hanamboarana collage volom-boaloboka
2.1 Collage taloha ho an'ny ankizy
2.2 Collage Vintage miaraka amin'ny loko
2.3 Sarin-tsary vita amin'ny sary taloha
3 Fandaharana sy rindranasa hanaovana collage vintajina
Voalohany indrindra, tokony ho fantatrao tsara izay lazainay amin'ny collage iray. Azo faritana ho a famoronana famoronana izay natao tamin'ny alàlan'ny sary isan-karazany, na sary na sary nalainao tamin'ny Internet. Izy io koa dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanaovana hosodoko, amin'ny alàlan'ny fampiasana singa avy amin'ny sanganasa samihafa izay manome fitambarana fiombonambe.
Indraindray ny collage dia tsy fampifangaroana sary fotsiny, zavatra izay afangaro amin'ny maro. Ary io collage io ve dia tena fampiasana fitaovana samihafa hananganana sary vaovao miaraka amin'izy ireo. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe manana magazine ianao ary manapaka efamira kely. Miaraka amin'izy ireo ianao dia mameno sary iray ary hamboarina amin'ny sombin-gazety izany nefa alamina amin'ny fomba hamoronana sary ho azy ireo. Tena izany no atao hoe collage.
Ary collage volom-boaloboka?
Raha misy collage vintage, dia miresaka momba ny a famoronana famoronana nefa misy toetra mampiavaka azy, toy ny fampiasana sary toa antitra, na amin'ny sary miavaka na amin'ny sary na zavatra izay heverina ho antitra. Ireo dia hampiasaina hamoronana fitambarana misy ireo singa ireo, miaraka amin'ny hafa, hamoronana sary tsy manam-paharoa.
Matetika, ny collage volo dia mampiasa base ao anaty crème na tononkalo pastel manjavozavo mba hanomezana izany endrika taloha sy mahazatra izany. Ho fanampin'izany, tsy dia be loatra izany, ary ny firafitra sy ny maody izay manome fikitika taloha dia ampiasaina betsaka.
Na izany aza, azo atao ihany koa amin'ny fampifangaroana ny maoderina amin'ny taloha, ohatra ny sary maoderina miaraka amin'ny fiaviana mahazatra.
Hevitra hanamboarana collage volom-boaloboka
Raha efa liana tamin'ny collage vintage ianao dia eto izahay hanome hevitra anao hahatratrarana azy. Raha ny marina dia handeha amin'ny sarotra kokoa isika mankany amin'ny bebe kokoa.
Collage taloha ho an'ny ankizy
Raha manan-janaka ao an-trano ianao ary te hanana fotoana mahafinaritra miaraka amin'izy ireo, dia azonao atao ny manolo-kevitra ny hamorona collage vintajina miaraka. Ho an'ity no ilainao sary an-tsokosoko amin'ny alokaloka pastel na loko malefaka be (na ocher), lakaoly, alokaloka ary faharetana.
Mikasika ny silhouette, iray amin'ireo antitra indrindra azonao raisina amin'ny Internet ny an'ny vehivavy. Azonao atao pirinty izany ary angataho ny ankizy mba hametaka tapa-dahatsoratra amin'ny magazina (tsara kokoa fa kely izy ireo) ao anatin'ny silhouette. Amin'izay, rehefa vita, raha mijery lavitra izy ireo, dia ho hitan'izy ireo ny silhouette an-dravehivavy ary, rehefa manakaiky izy ireo, dia ho tsikaritr'izy ireo ireo taratasy napetany.
Azonao atao ny manao toy izany amin'ny maodely alika na sary hafa izay tsy dia sarotra loatra.
Collage Vintage miaraka amin'ny loko
Manohy manao collage vintajina isika izao amin'ny alàlan'ny sary, fa koa mandoko. Ary ny tolo-kevitray dia ny hampiasanao sary taloha, koa omeo sary an-tsary izy ireo amin'ny alàlan'ny fandokoana ireo sary, toy ny hoe te hampiditra azy ireo ao anatin'ny andiam-panorona noforoninao ianao.
Mba hampisehoana fa tsara kokoa, dia ampirisihinay ianao, alohan'ny hanombohanao dia omena lakaoly fotsy maromaro ianao, avelao ho maina eo anelanelan'ny sosona iray sy ny iray hafa. Azonao atao ny maka taratasy taloha, sary sns. mba hanao ny firafitry, ary avy eo asio palitao fotsy vaovao. Amin'izany fomba izany dia ho voaro ny zava-drehetra.
dia Amin'ny loko akrilika, loko amin'ny rano na pensilihazo dia azonao atao ny mandoko azy ireo manome azy ireo mikasika hafa, na maka tahaka ny iray manontolo toa ny milaza tantara.
Sarin-tsary vita amin'ny sary taloha
Ity firafitra ity dia tena mitovy amin'ilay voalohany izay notorinay tamin'ny ankizy, fa raha ny tena izy dia manana fahasahiranana kely kokoa izy io satria ilainao mamorona ny maso amin'ny alàlan'ny taratasy ampiasainao hamoronana endrika.
Noho izany dia mila taratasy afaka misarika ny maso, orona, vava, volomaso, volo ... Tsy mila faritana voafaritra tsara ny zava-drehetra, raha tsy hoe te hampifantoka ny saina amin'ny faritra sasany ianao, toy ny maso na ny vava.
Manoro hevitra izahay, alohan'ny hametahana ny zava-drehetra, manaova fitsapana mba hahitana ny endriny ary avelao izy haharitra. Ka tsy ho diso ianao rehefa manangana azy.
Fandaharana sy rindranasa hanaovana collage vintajina
Raha tsy te-hanao izany amin'ny tanana ianao, izany hoe mandany tolakandro na andro maromaro mihitsy aza amin'ny fananganana manokana ny collage volo, dia manolotra programa sy fampiharana vitsivitsy izay hanampy anao amin'ny lahasa ianao. Araka izany, ny sary ilainao amin'ny solosainao PC na amin'ny takelaka na findainao ary programa na fampiharana hahazoana ny valiny (amin'ny tranga faharoa afaka segondra).
Ireto misy ny tolo-kevitray:
Ity fampiharana ity dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra hamoronana collage satria manana safidy haingo maro sy modely efa vita izay manampy anao, indrindra raha olom-baovao ianao ary tsy manana hevitra firy amin'ny fomba fanaovana azy.
Maimaimpoana izy io, na dia misy aza ny kinova aloa izay azonao atao mitadiava sticker, endritsoratra ary fiasa hafa hahasarika ny masonao.
Izy io dia iray amin'ireo rindranasa mifantoka indrindra amin'ny fanomezana sary an-tsary ny sarinao. Inona koa, Maimaimpoana izany ary hanana fiaviana, lahatsoratra, sary, taratasy fametaka ianao na afaka mandoko ny sary aza na manampy sary mihetsika. Ny zava-drehetra mba hijanona sary tonga lafatra.
Maimaimpoana izy io, ary azo alaina ho an'ny Android sy iOS, nefa misy dika pro miaraka amina endri-javatra sy safidy maro kokoa.
Hita ao amin'ny iOS, manome anao ny zavatra ampiasain'ity app ity Sivana Retro sy taloha izay manome fikitika hafa ny sarinao, ankoatry ny fahafahany manambatra maro amin'izy ireo hahatratra vokatra mahaliana.
Ny tena marina dia amin'ny resaka fandaharana, izay tonian-dahatsoratry ny sary dia hanompo anay satria ianao dia hamorona zavatra saika hatrany am-boalohany ary, misaotra ireo sivana ananan'ny fandaharana, azonao atao ny manome azy io sary an-tsokosoko taloha amin'ny segondra vitsy .
Avy eo ianao dia afaka mampiditra lahatsoratra na sary hafa hanasongadinana izay tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Hevitra mahafinaritra ahafahana manao collage vintage